လူထု မောင်ကာဠု: ပုသိမ်မြို့ ၊ ရေ ကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်း၌ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်(၃) ဦးမှ မြန်မာ မိသားစုတစ်ခုအား ရိုက်နှက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွါး
ကျွန်တော်တင်လိုက်သည့်အရေးကြီးသတင်းကို ဖွတယ်လို့ ပြောနေကြလို့ ဓါတ်ပုံပါ ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖွစရာလား မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေရော ဖုန်းနံပါတ်ပါ တိတိကျကျ ထည့်ပေးထားတာပဲ ။ အခု 18ရက်နေ့ ညနေ ထပ်ရတဲ့သတင်းကတော့ တရားခံကျော်ကြီးကို အာဏာပိုင်များမှပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတရားခံသည်
ရပ်ကွက်ထဲတွင် ဒုတ်ကိုင်၍ စိန်ခေါ်သောင်းကြမ်းနေပါသည် ။ ဆေးရုံပေါ်တွင်ရှိနေသော မမာမာဦးအား ရဲမှ လုံးဝ(ယ္ခုအချိန်ထိ)စစ်ချက်လာ၍မယူသေးပါ ။ ထို့ကြောင့်မနက်ဖန်တွင် မီဒီယာ(၅)ခုနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံပေး ပါမည် .....လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းမဖြစ်စေချင်ပါ ဥပဒေအရသာ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးစေလိုပါသည် ။
ပုသိမ်မြို့ ၊ ရေ ကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်း၌ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်(၃) ဦးမှ မြန်မာ မိသားစုတစ်ခုအား ရိုက်နှက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည် ။
အရိုက်ခံရသူမှာ မမာမာဦးအသက်(23နှစ် ) အဖ- ဦးဌေးလွင် ၊မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၄/သပန(နိုင်)၂၆၈၉၉၉ ၊ မိခင်ဖြစ်သူနှင့်
မောင်အရင်းတော်စပ် သူများပါ အရိုက်ခံရကြောင်းသိရသည် ။ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်သူ များမှာ (၁)ကျော်ကြီး အသက်(၂၅နှစ်) အဖ ဦးကျော်ရွှေ ၊(၂)ဒေါ်နိုဒဘီ (ကျော်ကြီးအမေ) (၃) ခင်မာဝင်း (ဇနီး) (၄) ကာဒယ် (အဒေါ်) တို့မှ အိမ်ခြံတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်သောကြောင့် မမာမာဦးနှင့် ၄င်းမောင်တော်စပ်သူအပါအ၀င် မိခင်ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်းတို့ပါ အရိုက်ခံရကြောင်းသိရသည် ။
မမာမာဦးမှာ ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများနှင့် ထွက်ပြေးသတိလစ်နေတုန်း ရပ်ကွက်သားများမှ ဆေးရုံသို့ပို့ပေး၍ ဆေးကုသခံယူနေကြောင်းသိရှိရသည် ။ ရိုက်နှက်သူမိသားစုသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်နှက်မှု များကို ကျူးလွန်နေသော်လည်း တရားဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူမှု မရှိသောကြောင့် သာမန် ပဋိပက္ခမှသည် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း သို့ ကူးစက်သွားနိုင်ကြောင်းအဆိုပါရပ်ကွက်နေသူတို့ထံမှ ထွက်ဆိုလာပါသည် ။
ရိုက်နှက်မှုတွင်ပါဝင်သော ကျော်ကြီးသည် ရိုက်နှက်မှုအပါအ၀င် အခြားအမှုပေါင်း ၁၅ မှုလောက်ကိုကျူးလွန်ထားသော်လည်း ထိရောက်သော အပြစ်ဒဏ်ခံရမှုများများမရှိသဖြင့် ပို၍အတင့်ရဲလာပြီး စိတ်ထင်တိုင်းမိုက်ရိုင်း နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။ ထို့သို့ ရိုက်နှက်မှုများဖြစ်ပွါးပြီးသောအခါ မြို့ပေါ်ရှိ အစ္စလာမ်ကူညီရေးအဖွဲ့မှ အကြီးအကဲ မိုးပုလဲ ဒဏ်ပေါက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့် အစ္စလာမ်လူမျိုးများမှ ၀ိုင်းကာကွယ်ပေးထားကြောင့် သိရသည် ။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ အချိန်မှီ ထိရောက်အောင် (လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများ မဖြစ်ပွါးအောင်) အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အကြောင်းကြားတင်ပြအပ်သည် ။
ပေးပို့ သူ ကိုညီသုတ
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 12:18
အမျိုးအစာ ဖြစ်ရပ်မှန် မှတ်တမ်း
Anonymous 18 May 2013 at 23:40
ဒီကိစ္စကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြပါ။
မခံချင်လို့ ထလုပ်တဲ့ ဗမာတိုင်းကို
( မြေလတ်လုလင် )
Anonymous 19 May 2013 at 00:32
Why police in Pathein Township do not arrests Muslim Islamic terrorists until today ? Why Is The Sky Dark at Night?
Anonymous 29 May 2013 at 03:49
Oh. myanmar nations, don't poor, don't lack of knowledges, Be kill the muslims..why peoples eat the pilaf? the eating is pilaf encourage to the muslims..that is why, don't eat for that.
Anonymous 8 June 2013 at 10:57
လီးကုလား မင်းလိုခွေး မျိုး၁၅ကောင် ငါတစ်ယောက်နဲ့ဖိုက်မယ် Hello မိုးပုလဲကလား ဝက်သားနဲ့ပါဆယ် ၅ပွဲ ပိုတာပြန် မအမ်းနဲ့ ပုသိမ်ကငါသား ရဲလေးတွေဆီ သွားပို့လိုက်